How To Gara Wakachengeteka Nepo Driving Munguva Winter | Save A Train
musha > Travel Europe > How To Gara Wakachengeteka Nepo Driving Munguva Winter
Winter ndiyo nguva yakakwana kuvaka kwomurazvo moto, zvakachengeteka yarova mawere, kuvaka snowmen uye snuggle pamwe mukombe akanaka yetii. Zvinosuruvarisa, hazvisi zvose kunakidza uye mitambo. Winter pave dzimwe mugwagwa kupfuura kutendeka mamiriro. Nokuti hazvibviri kuti vakawanda vedu kuti dzinorara kwenguva refu kusvikira chitubu, pano vari iwo matipi unofanira sei vadzivirirwe achityaira munguva yechando.
Safe Driving? Numbers Regai Nhema
Funga tiri ari kunyanyisa kungwaririra kukupa mazano pamusoro sei kuti vadzivirirwe achityaira panguva Winter? Maererano ne AAA, Winter madutu, mamiriro okunze akaipa, uye poromoka mugwagwa mamiriro uri chinhu anenge hafu yemiriyoni abondera uye kupfuura 2,000 mugwagwa kufa yechando ose.
Rongedzai Up Emergency Supplies kuti Travel wako Car
dzimwe nguva, chinangwa chako kugara akachengeteka achityaira panguva chando hakuna kukwana. Tinoda kurarama Mashoko, 'Tariro yakanakisisa, kugadzirira rakaipisisa '. Iva nechokwadi motokari yako vakagadzirira pamwe zvokuyamura mune nyaya zvashata. Ivaiwo noushamwari negumbeze, inodziya mbatya, yokutanga rwekutanga zvi-, mumwe furashiraiti kana kugabhuka, jumper netambo, ice itsvedzerere, nefoshoro, jecha kana Kitty nemarara kukupa traction, uye chando chain. Unofanirawo kutakura zvimwe mvura, wezvokudya-like simba nembariro kana muhwezva kunovhengana-uye foni mundiro!
Tarisa uone Ice pane Mirirazi Yako Kuti Ugare Wakachengeteka Paunenge Uchityaira
Uyu yechando kutyaira yokutenda kuti nyanzvi -Refu dhonza vatyairi kushandisa kuona kana mugwagwa mamiriro vari nechando. Ongororai rako kunze nezvionioni. Kana chando ari kutanga kuumba pamusoro nezvionioni, kuti inoratidza zvakanaka kuti chando riri dzichiumbwa pamusoro mumigwagwa. Tora mamwe matanho kuti vadzivirirwe achityaira kana kumirira kusvikira rematsutso kuti kutyaira.
Kutyaira Upinde Leave Early!
Izvi zvingaita segore pachena chete, asi tinoziva kuti muri kubatikana uye anoda kuti wako inotevera rwendo. Tiri pano kukuyeuchidza kuti uitore kuderedza! Imwe yemazano edu makuru pane How kugara akachengeteka achityaira munguva yechando anobvumira yokuwedzera nguva kusvika pa kwauri kuenda. Trips anogona kutora nguva yakareba panguva yechando pane dzimwe nguva dzegore, kunyanya kana ukasangana dutu mamiriro kana migwagwa nechando. Uye kutyaira mu asina kunaka ekunze kunonetesa pfungwa zvakakwana pasina wakawedzera kumanikidzwa yokunonoka, izvo kuti kudzikatidza njodzi kutyaira mutongo wako.
Kutyaira Upinde Usanyanya Zvipiringidzo
How kugara akachengeteka achityaira panguva Winter #1 muromo: Isa pasi foni yako! Chengeta foni yako akatendeuka kure kana zvakabatana motokari yako Makaralı-uye haana kutora maoko enyu kubva vhiri kana maziso mumugwagwa kuti aone kuti WhatsApp mashoko.
Garai Safe Nepo Driving Zvinoreva Inzwai Road!
Aihwa, haana kuteerera mwoyo wako. Kwete nguva ino zvisinei. Teerera mugwagwa. chaizvoizvo. Tires mitinhimira siyana apo motokari pamusoro chando uye chando, inova chimwe chikonzero kuchengeta redhiyo inzwi rako pasi kuti chando kutyaira vakachengeteka. Chando mugwagwa ruzha kunofanira nekaupenyu nenzwi nokuti chando iri ndokupfura kukwira. Kana mheremhere pakarepo rinomira, ungadaro vakatamira vachibva chando kune chando. Ramba zvirire kuna rira pamusoro matai ako mumugwagwa kuramba pamusoro mugwagwa ezvinhu kuti kazhinji zvachinja, kunyanya panguva kana pashure dutu zvakanaka.
Anti-Kumhara kana uchida kugara wakachengeteka paunenge uchityaira
Sei Kugara Wakachengeteka Nepo Driving Munguva Winter? Iva nechokwadi chenyu wiper Urume rine Anti-Ndinoda, saka pfapfaidzo asingagari -oma kukwira kuchitonhora. Funga kutenga chando wiper mashizha, izvo kudzivirira chando uye chando kubva kuomesa pamusoro wiper!
I akatevera Mazano enyu uye achiri rakanamatira
dzimwe nguva, izvi pum kudziviswa. Kana ukaenda rakabayirwa chando vari pano zvimwe nokukurumidza mazano:
Garai motokari yako: Motokari yako inopa kwenguva pokugara uye anoita kuti zvive nyore vanunuri kuwana iwe. Havaedzi kufamba dutu. Zviri nyore tichiona motokari yako anoridza chando uye kuva yakarasika.
Regai overexert pachako: Kana kuchera kubuda motokari yako, kuteerera muviri wako uye kumisa kana iwe wava kuneta.
Iva Chinooneka: Sunga jira rine ruvara rwakatsvuka kune kanyanga kemota yako kana kuisa jira kumusoro kwehwindo rakamonerwa kuratidza kusagadzikana. usiku, chengeta rising chiedza kana zvichibvira. It chete anoshandisa shoma nemagetsi uye achaita kuti zvive nyore kuti vanunuri kuwana iwe.
Kubvisa chiutsi Pipe: Iva nechokwadi kuti chiutsi nenyere hauna tsinga nesinou, chando, kana matope. A makavhara chiutsi mutopota kunogona kukonzera ngozi carbon monoxide gasi kuti achigarira maoko kupinda mufambi mupanda motokari apo injini iri achimhanya.
Stay Warm: Use chero hunowanika putira muviri wako nechando. Izvi zvinogona kusanganisira uriri nepanhovo, mapepanhau, kana mapepa mepu. Pre-rongedza magumbeze inoremerwa zvipfeko kushandisa nyaya zvashata.
kuchengetedza Fuel: kana zvichibvira, Mhanya chete injini uye hita refu zvakakwana kubvisa chill. Izvi zvichabatsira kuti kuchengetedza mafuta.
Car Travel? Hanya zvose isu chete akati
Zvakadini kana paiva nzira waunogona kudzivisa kupfuura zvose dzichikunetsa Kugara njodzi yacho achityaira? Dai chete kwaiva nzira yokufambisa kuti unogona kusvetuka zviende, uye vasvike nokwawaienda nokukurumidza uye kufamba zvakanaka. Oh mira, pane! Zvakanyorwa kunzi chitima!
Ichokwadi kuti motokari kupa rusununguko vashoma vamwe modes pamusoro transports ita. Unogona kufamba pamwe zvimwe zvatisingagoni kumahombekombe migwagwa, musoro kure nemisha, uye musafunganya pamusoro purogiramu kana zvigaro vachitengesa kunze. Havasi pasina kukanganisa kwavo, zvisinei. Ona zvakawanda zvikonzero pamusoro!
Zvitima ngozi uye dzichimhanya! Saka hapana chikonzero vadzivirirwe achityaira kana iwe Dzidzisai pakufamba, uyewo Zvitima vari inokwanisika, kunyanya kana uri kushandisa Save A Train kuti bhuku rako chitima matikiti. Need zvakawanda zvinogutsa? We akanyora Blog rose nei chitima kufamba mukuru mugwagwa pakufamba.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsafe-driving-during-winter%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#safetips #anofamba #chando chando europetravel Tranride